Mucaaradka Ethiopia ‘oo 40 km u jirsaday’ Addis Ababa | Dalkaan.com
Home Warkii Mucaaradka Ethiopia ‘oo 40 km u jirsaday’ Addis Ababa
Mucaaradka Ethiopia ‘oo 40 km u jirsaday’ Addis Ababa
Addis Ababa (dalkaan) – Hoggaamiyaha mucaaradka Oromada ee dagaalka kula jira dowladda Ethiopia ayaa sheegay in ciidankiisa ay qarka u saaran yihiin magaalada caasimadda ah, ayna diyaarinayaan weerar kale, isaga oo saadaaliyey in dagaalka uu “mar dhow” soo gebo-geboobi doono.
Jaal Marroo, oo hoggaamiya ciidamada xoreynta Oromada ee OLA, ayaa uga digay ra’iisul wasaare Abiy Ahmed in dagaal-yahanada taageersan dowladda ay soo goosanayaan, islamarkaana mucaaradka ay aad ugu dhow yihiin guul.
“Waxa aan hubo ayaa ah inay dhowaan soo dhamamaan doonto,” ayuu Jaal oo magaciisa runta ah uu yahay Kumsa Diriba u sheegay wakaaladda wararka AFP oo wareysatay.
“Waxaan diyaarineynaa inaan qaadno weerar kale. Dowladda hadda waxay isku dayeysaa oo kaliya inay hesho waqti dheeri ah, waxayna isku dayayaan inay huriyaan dagaal sokeeye, sidaas ayay ugu baaqayaan shacabka inay dagaalamaan.”
OLA iyo kooxda ay xulufada yihiin ee TPLF ayaa toddobaadyadii dhowaa sheetay guulo dhowr ah, waxayna qabsadeen magaalooyin caasimadda u jira 325 km.
Jaal ayaa sheegay in dagaal-yahanadisa ay hadda 40 km oo kaliya u jiraan Addis Ababa, islamarkaana aysan marnaba hal tallaabo dib uga laaban dhulka ay maamulaan.
Si madax-banaan looma xaqiijin karo sheegashadiisa.
Dowladda Ethiopia ayaa horey u diiday sheegashada mucaaradka ee ah inay masaafo dhow u jiraan Addis-Ababa, hase yeeshee waxay shacabka ugu baaqday inay magaalada difaacaan.
Jaal ayaa dhinaca kale sheegay in OLA aysan “halis ku aheyn” shacabka, balse wuxuu dalbaday in Abiy Ahmed iyo xisbigiisa Prosperity Party “gebi ahaan meesha laga saaro” si dib u heshiisiin loo billaabo.
“Waxaan Ethiopia iyo Geeska Afrika ka dhigi doonaan meel nabad ah oo degan oo lagu noolaado. Waan hubaa dagaal ma jiri doono marka taliska Abiy Ahmed uu meesha ka baxo,” ayuu yiri.
Previous articleHalista diyaaradihii Drone-ka ee lagu qabtay Muqdisho
Next articleEmile Smith Rowe oo looga yeeray xulka England iyadoo dhaawac ahaan looga Marcus Rashford
Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin Email Print Viber Muqdisho (Caasimada Online) – Ra’iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliyam Mudane Maxamed Xuseen Rooble oo xalay khudbad ka jeediyey munaasabad si weyn loogu maamusayey ergada Soomaaliya...
Manchester City oo hogaanka u haysa tartanka loogu jiro Erling Braut...
Raphael Varane oo ka Warbixiyay Dhaawiciisa uu hormar ka sameeyay Todobaadyadii...